Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tahotra amin'ny fifidianana any Bangladesh: Hotely banga amin'ny vanim-potoanan'ny mpizahatany
Ny vanim-potoana fara-tampon'ny fizahan-tany Bangladesh dia izao, fa ny toerana fizahan-tany any Bangladesh toa an'i Cox's Bazar kosa dia nilaozana. Ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny firenena aziatika dia voadona mafy noho ny tsy fandriam-pahalemana sy korontana misy ankehitriny. Ny antony dia ny fifidianana nasionaly ho avy ny alahady izao.
Ny mpitsangatsangana anatiny sy anatiny dia kivy sy voarara tsy handeha amin'ny toerana mafana amin'ireo fizahan-tany any Bangladesh satria nametraka fameperana isan-karazany ny fitondrana.
Trano fandraisam-bahiny, hotely fandraisam-bahiny ary trano fandraisam-bahiny lehibe no niatrika ny tahan'ny tahan'ny mponina ambany toerana marobe na dia amin'ny alin'ny New Year aza noho ny tahotra sy ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny olona.
Ny loharanom-pahalalana momba ny indostria dia nilaza fa ny fitondrana dia nanome baiko ny hotely mba tsy hamela na hamepetra ireo vahiny aorian'ny anio (asabotsy).
Ankoatr'izay, ny fameperana roa andro amin'ny fivezivezena amin'ny fiara manerana ny firenena dia nahatonga ny mpizahatany natahotra kokoa ny hijanona amin'ny faritra be mpizahatany.
Cox's Bazar dia tanàna any amin'ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Bangladesh. Fantatra amin'ny morontsiraka lava sy feno fasika izy io, manomboka amin'ny Sea Beach any avaratra ka hatrany amin'ny Beach Kolatoli any atsimo. Monasiteran'ny Aggameda Khyang dia tranon'ny sarivongana varahina sy sora-tanana bodista taloha. Any atsimon'ny tanàna, ny ala tropikaly ao amin'ny Himchari National Park dia misy riandrano sy vorona maro. Ny sokatra avaratra sy ny ranomasina dia miompana amin'ny Nosy Sonadia eo akaiky eo.
Foana ny trano fandraisam-bahiny rehefa nanantena ny famandrihana firaketana izy ireo ho an'ny fankalazana ny taona vaovao.
Tsy tonga any Bangladesh ny vahiny noho ny fifidianana sy ny famerana ny visa
Mikasika ny hetsiky ny fizahan-tany any an-toerana, ny ankamaroan'ny fianakaviana izay matetika mivezivezy any amin'ny toerana fialantsasatra samihafa mandritra ny ririnina dia misoroka ny dia lavitra noho ny tsy fahatokisana aorian'ny fifidianana, hoy ireo mpitsikera indostrialy.
Ny horohoron-tany sy tsunami tany Filipina dia nihena 7.2 ka 6.9